Talooyin SEO ah oo laga bilaabo Sempt ee Ganacsiga Aasaasiga ah ee Meelaha Jirka ah
Fikradda ku jirta SEO-ga gudaha waa mid aad u fudud. Waxaad fadhiisanaysaa oo dejisaa istaraatijiyadIsku-duwaha astaantaada meel juqraafi ah oo gaar ah (badanaaba magaalo ama gobol) si ay u noqoto (calaamaddaada) ka muuqato raadinta degaanka.Tusaale ahaan, haddii aad leedahay dhar dhaqashada Texas ka dibna SEO-ga maxaliga ahi wuxuu hubiyaa in qof kasta oo raadinaya adeegyada dharka lagu dhaqdo gudaha ama agagaarkiisaTexas waxay ku aragtaa. Nidaamku wuxuu noqon karaa mid adag laakiin fikradu waa sahlan tahay in la fahmo.
Waxyaaluhu wax yar ma tarto marka ganacsigaaga uu ku jiro wax badanka badan hal meel. Maadaama aadan kudari karin istaraatiijiga SEO-gaaga hal meel, maxaad samaynaysaa? Anrew Dyhan, Guusha MacaamiishaMaamulaha Sare wadaagaan talooyinka kaa caawin doona in aad markale hesho aragti dheeraad ah iyada oo loo marayo SEO-ga maxalliga ah. Maskaxda ku hay in talooyinkan loogu talagalayganacsiyada leh meelo badan.
Waa in hal domain la sameeyo dhamaan meelaha aad ka tirsan tahay
Samee barta ku haysashada dhamaan meelaha aad ku martigelisay hal domain.Waxaa laga yaabaa inaad ku jahwareerid inaad dhisatid websaydhka mid kasta oo ka mid ah goobaha adeegga laakiin taasi ma fiicna. Taasina waa sababta: sameynta bogag badanwaxay kaa horjoogsataa dadaalkaaga si aad u dhisto maamullo muhiim ah. Halkii laga heli lahaa hal domain oo aad leedahay lahjado badan oo ka mid ah bogagga internetka.Ku noqo tusaale ahaan ganacsiga dhar dhaqashada - inaad diiradda saarto hal domain (sida laundryservice.com) halkii ay ka dhici lahayd ftworthlaundryservice.com,houstonlaundryservice.com iyo adeegga dallasla..
U diyaari bogga adeega meel kasta oo adeeg ah
Inkastoo dhamaan goobaha adeeggaaga lagu martigeliyo hal domain,waxaa jira baahi loo qabo in qof kasta loo magacaabo bogga. Habka ugu fiican ee lagu sameyn karo waxay noqon kartaa adigoo naqshadeynaya "Meelaha" tabahaaga markaahalkan ku qor. Hubso inaad ku darto cinwaanka, faahfaahinta xiriirka iyo saacadaha ganacsiga. Sidan, Google iyo makiinadaha kale ee raadinta waxay awoodaanraadso oo ku daraan macluumaadka ku haboon ee dhismaha kasta.
Nadiifi xayiraadda degaankaaga
Sababtoo ah wax waliba u muuqdaan kuwo ku fiican boggaaga macnaheedu maahawax walba waa ku fiican yihiin webka. Website-yada dib-u-eegga ee degaanka sida Yelp ayaa ku qori doona goobaha adeegaaga ee shakhsiyaadka shakhsiyadeed sidaas awgeedinaad dalbato oo hubiso in macluumaadka la bixiyay ay sax yihiin. Kuma bixin kartid xitaa hal isku mid ah maaddaama tani soo jiidato adigaIstaraatiijiga SEO. Waxaa jira qalab aad isticmaali karto si aad u nadiifiso xayiraaddaas.
Isticmaal nuxur gaar ah ee meel kasta oo adeega
Ma jiraan wax gaaban halkan. Haddii aad rabto inaad midba midka kale ku fiicnaadogoobta, ka dibna waa inaad ku dhejisaa waxyaabo gaar ah. Si kale haddii loo dhigo, meel kasta oo adeega waa inuu leeyahay qoraal cusub oo qoranla fududeeyay. Haddii aad u maleyneyso inaadan kari kari weydo sidan, isku day in aad u beddesho. Ku dhaji blogka meel kasta oo asbuuc kasta ah. Isticmaal ereyada muhiimka ah.Taas waxaa dheer, ku dhiiri geli macaamiishaada inay qoraan dib u eegis. Qof u magacaaba meel kasta si aad uga jawaabto dib u eegista. Tanima aha oo kaliya kor u qaadida aragtidaada laakiin sidoo kale waxay kaa caawineysaa inaad saxdo wixii qalad ah oo ay kor u qaadaan adeegga adeegga
Hirgelinta talooyinkani waa inay kugu hagaajiyaan wadada guusha.Si kor loogu qaado dadaalkaaga, ku dhaji bloggaaga firfircooni cusub, hubi dib u eegista iyo ka jawaab, iyaga oo isticmaalaya dibadda iyoxiriirinta soo socota, iyo abaabulida xisaabin joogto ah ee xaquuqdaada Source .